यि नेपाली कृषक जसलाई अकबरे खुर्सानीले बनायो करोडपति – Gazabkonews
ईलाम । ईलामको सुर्योदय नगरपालिका–१२ आठघरेका मदन राई लामो समयदेखि कृषि पेसामा छन् । उनले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेर मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् ।
वर्षको झण्डै १० लाख रुपैयाँको अकबरे खुर्सानी बिक्री गर्ने उनले यसैको मुनाफाले डेढ करोड मूल्य बराबरको ३० रोपनी जग्गा समेत जोडे ।
यो भिडिओमा उनले हामीसँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन् । अकबरे खुर्सानी खेती कसरी गर्ने ? यसको बजार कस्तो छ ? यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? मुनाफा कति हुन्छ ? लगायतका प्रश्नहरुमा उनले खुलेर जवाफ दिएका छन् । कृपया भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरै हेर्नुहोला । भिडिओः